उच्च रक्तचापका बिरामीले दही खान मिल्छ ? | सुदुरपश्चिम खबर
उच्च रक्तचापका बिरामीले दही खान मिल्छ ?
व्यस्त जीवनशैली, मानसिक तनाव र कम शारीरिक गतिविधिका कारण पछिल्लो समय उच्च रक्तचापका बिरामी बढिरहेका छन् । उच्च रक्तचापका कारण मस्तिष्कघात, प्यारालाइसिस र निद्रा नलाग्ने जस्ता समस्या आउन सक्छन् । यसकै कारण हृदयघात समेत हुनसक्छ ।
यसको समस्याबाट बच्न विभिन्न उपाय अपनाउनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । उच्च रक्तचापको समस्या कम गर्न खानेकुरामा पनि ध्यान दिनुपर्छ । धेरैजसो उच्च रक्तचापका बिरामी दही खान रुचाउँदैनन् । दहीले रक्तचापलाई अझ बढाउने उनीहरुमा भ्रम देखिन्छ ।
तर चिकित्सकहरु भने दहीले उच्च रक्तचापका बिरामीका लागि दही फाइदाजनक रहेको बताउँछन् । दहीमा क्याल्सियम, आइरन, पोटासियम, भिटामिन बी र म्याग्नेसियम जस्ता पोषक तत्व पाइने भएकाले उच्च रक्तचाप नियन्त्रण गर्न यसले मद्दत गर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
दहीमा पाइने म्याग्नेसियमलाई पनि स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले फाइदाजनक मानिन्छ । यसमा पाइने क्याल्सियमले मांसपेशीको बलियो बनाउँछ भने हड्डीसम्बन्धी समस्यालाई कम गर्न सहयोग गर्छ । यसको प्रयोगले मुटुसँग सम्बन्धित समस्यालाई पनि फाइदा गर्छ ।
दहीको प्रोबायोटिक गुण स्वास्थ्यका लागि फाइदाजनक हुन्छ । यसले पाचन प्रणालीमा सुधार ल्याउनुका साथै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने काम गर्छ । यसको सेवनले ताजापनको पनि महसुस हुन्छ ।
दहीलाई प्रोट्रिनले भरिपूर्ण खाद्य पदार्थका रुपमा लिइन्छ । यसले आन्द्रालाई पनि स्वस्थ राख्न सहयोग पु¥याउँछ । महीले पनि उच्च रक्तचापको समस्यालाई नियन्त्रण तथा कम गर्न सहयोग गर्छ ।
दही यसकारण फाइदाजनक
दही सेवनले पाचन प्रणालीलाई फाइदा पु¥याउँछ । पेट खराब हुँदा दही खाए निको हुन्छ । दहीलाई सन्तुलित स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । यसको सेवनले शान्त बनाउने काम गर्छ भने तौल नियन्त्रणमा पनि सहयोग पु¥याउँछ । दहीलाई छालाको लागि पनि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।
दहीलाई रातमा नभई सकेसम्म दिउँसो सेवन गर्नुपर्छ । राति दही खाँदा रुघाखोकी लाग्न सक्छ । साससम्बन्धी समस्या भएका बिरामीले भने राति कहिल्यै पनि दही सेवन गर्नुहुँदैन ।
तर फ्याट भएको दहीले भने मुटुमा केही असर पार्न सक्ने मुटुरोग विशेषज्ञ डा. हरिहर दाहाल बताउँछन् । यद्यपि यसमा विस्तृत अध्ययन हुन बाँकी नै रहेको उनको भनाइ छ । समग्रमा दही स्वास्थ्यका दृष्टिकोणले फाइदाजनक रहेको र माइग्रेन तथा ग्यास्टिकको समस्या भएका व्यक्तिले सेवन गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।
‘दहीले माइग्रेन र ग्यास्टिकको समस्या भएकालाई हानि गर्छ, तर मुटुमा भने यही नै असर गर्छ भनेर भन्न सकिंदैन,’ डा. खनाल भन्छन्, ‘फ्याट नभएको दहीले स्वास्थ्यलाई फाइदा पु¥याउँछ । दहीले पाचन प्रणालीलाई मजबुत बनाउनुका साथै गर्मीमा पनि लाभदायक हुन्छ ।’ अनलाइनखबर बाट सभार
क्याप्चा हल गर्नुहोस् * + 48 = 49